I-Guggulsterone powder (95975-55-6) hplc =98% | Yenza ama-Reagents we-R & D
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Guggulsterone powder
SKU: 95975-55-6. Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-oda olubanzi lwe-Guggulsterone powder (i-95975-55-6), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Ividiyo ye-Guggulsterone powder
I-Raw Guggulsterone powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Guggulsterone powder
Formula Yamamolekhula: C21H28O2
Isisindo somzimba: 312.45
I-Melt Point: I-170-171.5 ° C
Isitoreji Sokugcina: I-2-8 ° C
Umbala: Iphuzi eliphuzi elikhanyayo
I-Raw Guggulsterone powder ekusetshenzisweni
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Résine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone powder, njll
Ukusetshenziswa kwe-Guggulsterone powder
I-Guggulsterone powder iyinhlangano ye-phytosteroid etholakala ku-resin yesitshalo se-guggul, i-Commiphora mukul. I-Guggulsterone powder ingaba njengenye ye-stereoisomers, i-E-Guggulsterone powder ne-Z-Guggulsterone powder. Kubantu, kuba ngumphikisi we-farnesoid X receptor, eyake yakholelwa ukuthi ibangele ukwehla kwe-cholesterol synthesis esibindi. Ucwaningo oluthile luye lwashicilelwa ukuthi alukho ukunciphisa jikelele kwe-cholesterol ephelele kwenzeka ngokusebenzisa imithi ehlukahlukene ye-Guggulsterone powder, futhi amazinga we-lipoprotein aphansi ("i-cholesterol embi") yanda kubantu abaningi. Noma kunjalo, i-Guggulsterone powder iyisithako emithonjeni eminingi yokudla okunomsoco.
Oleogum resin (eyaziwa ngokuthi guggul) emthini guggul, Commiphora mukul, atholakala India, Bangladesh nePakistan, liye lasetshenziswa ukuze kubhekiselwe ukwelapha izifo ezehlukene okufaka Hyper-cholesterolemia, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, rheumatism, ukukhuluphala zezinkulungwane ezimbalwa zeminyaka. I-Guggulsterone powder ehlukaniswe ne-guggul iye yabonakala njenge-bioactive eyabangela imiphumela yezokwelapha ye-guggul. Njengoba isifundo sokuqala sibonisa imiphumela yokwelapha ye-guggul esenzakalweni sezilwane ku-1966, imigwaqo eminingi yezinhlanzi kanye nemitholampilo iyenziwa. Nakuba umehluko cwaningo design, izinga methodological, ukuhlaziya ngokwezibalo, usayizi isampula, futhi kuncike labantu umphumela nokushintshashintsha ezithile kumpendulo yokwelapha, idatha ayesehle kusuka ngaphandle kwesibeletho, preclinical, futhi izifundo zokwelapha kakhulu ukusekela izimangalo ezakhelwe guggul ezichazwe umbhalo wasendulo we-Ayurvedic. Kodwa-ke, izifundo zokwelapha esizayo ngamasayizi amakhulu nakakhulu isikhathi eside kuyadingeka ukuqinisekisa lezi zimangalo. Izinzuzo ze-cardiovascular of therapy zitholakala emisebenzini eminingi yezemithi ehlobene ne-guggul noma i-Guggulsterone powder, ikakhulukazi i-hypolipidemic yayo, i-antioxidant, ne-antiinflammatory activities. Kuye kwasungulwa ukuthi i-Guggulsterone powder ingumphikisi e-farnesoid x receptor (FXR), isilawuli esiyinhloko sokubhalisa ukugcinwa kwe-cholesterol ne-bile acid homeostasis. Ukuphikisana kwe-FXR yi-Guggulsterone powder kuye kwaphakanyiswa njengendlela yokwenza umphumela wayo we-hypolipidemic. Ucwaningo olusanda kuveza lubonisa ukuthi i-Guggulsterone powder iphakamisa iphompo ye-salt export export (BSEP), i-efflux transporter enomthwalo wokususwa kwe-cholesterol metabolites, i-bile acids esibindi. Ukuphakanyiswa okunjalo kwe-BSEP ukuboniswa yi-Guggulsterone powder kuthatha uketshezi lwe-cholesterol ibe yi-bile acid, ngakho-ke kubonisa enye indlela engenzeka ngayo umsebenzi wayo we-hypolipidemic. I-Guggulsterone powder itholakale ukuba ivimbele ngokusheshisa ukusebenza kwe-nuclear-kappaB (NF-kappaB), umlawuli obalulekile wezimpendulo zokuvuvukala. Ukunciphisa okunjalo kokuvuselela kwe-NF-kappaB yi-Guggulsterone powder kuye kwaphakanyiswa njengendlela yokwelashwa okungafaki ukulimaza kwe-Guggulsterone powder.
Futhi Yiziphi Ezinye Izimpawu Zokuntuleka?
Kwakungengqondo kimi ukuthi uma umuntu engase ahlangane nemiphumela yokushisa amafutha amahomoni wegciwane neyama-hormone e-adrenergic (isib. Adrenaline) into evelele kakhulu ingabangela. Futhi, okuthakazelisayo yiqiniso lokuthi uhlobo lwe-ECA uhlobo lwezinhlamvu luvame ukunciphisa inani lamahomoni wegciwane elijikeleza egazini ngokuhamba kwesikhathi. I-Guggulsterone powders yenza umsebenzi omuhle wokuvimbela lokhu kunciphisa, ngaleyo ndlela igcine zonke izinhlelo zokushisa amafutha ezisebenza ngokomzimba ezisebenza ezingeni eliphezulu.
Izindlela zokugcina ukuthi i-Guggulsterone i-powders ingazuza ekulwa nokushisa amafutha ku-diet ketogenic nokusetshenziswa kwe-hormone yokukhula. Ngokuhamba kwesikhathi, izidlo ze-ketogenic zivame ukunciphisa ukusebenza kahle kwe-thyroid ngokunciphisa ukuguqulwa kwe-T4 ku-T3 enamandla kakhulu. Futhi, lapho i-Guggulsterone i-powders ithathwa nsuku zonke ngezinyanga ze-3, yenze ukunciphisa okuqhubekayo kwezilonda emanzini amaningi. Nge-tetracycline, ukunciphisa amaphesenti kwezilonda zokuvuvukala kwaba yi-65.2% uma kuqhathaniswa ne-68% nama-powder Guggulsterone. Njengoba ungabona, umngane wethu uGuggul unamandla kakhulu empini yokulwa namakhova.
Ubani ongazuza kulokhu? Hmmm !!! Kulungile, njengoba ngingakusho, cishe wonke umuntu. Akekho umuntu oyedwa engazi ukuthi angathandi ukugqama okungcono. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu kulabo abane-anabolic / androgenic steroids ngoba lezi zivame ukwandisa amafutha okukhumba kanye namathuba okugcoba. Ake ngicabange - akekho ohleka uMnu Huggulee Guggulee! Ngempela, angase abe negama elihle kodwa encwadini yami uyindoda. Uphi lapho ungathola khona i-compound eyokusiza ulahlekelwe amafutha, uthuthukise iphrofayli yakho ye-cholesterol, futhi ngesikhathi esifanayo uthuthukise ubuso bakho? Ngibhekile isikhathi eside futhi nginzima futhi angakatholi ngisho nomncintiswano oyedwa.
Kufanele Kube Ningi Kangakanani?
Futhi Zikhona Noma Iziphi Imiphumela Zemibala?
Ngempela! Ngaphambi kokuba ngikhohlwe, umthamo owodwa okufanele uthathe ngu-30-60mg kathathu ngosuku ngokudla.
Khumbula njalo noma ukuthola umkhiqizo oqukethe i-Guggul ekhishwe ngamanzi aphezulu! Iseluleko sami sokugcina ke ukuphuma bese sithola lo mfana, sishukumise isandla sakhe, bese uvuna inqwaba yezinzuzo azilethayo.
Isexwayiso ku-Guggulsterone powder
I-resin ephuzi ekhishwe esitshalweni se-guggul iqukethe izinto ezibizwa ngokuthi i-Guggulsterone powders kanye nabanye. Ucwaningo lwe-laboratory luye lwathola ukuthi i-Guggulsterone powders ingashintsha umthambo we-cholesterol ngesibindi. I-Guggulsterone i-powders ingase futhi ikhulise ukukhiqizwa kwe-hormone yegciwane futhi ijwayele ukuhlanganiswa ekufakeni izisindo zokulahlekelwa kwesisindo ngaleyo njongo. Imikhiqizo equkethe izitshalo ze-guggul kufanele ithathwe ngokuqapha ngenxa yobungozi bemiphumela emibi.
Sezinkulungwaneni zeminyaka, i-guggul resin isetshenziselwe imithi yendabuko yokwelapha i-rheumatism, i-arthritis, izifo ze-neurological, i-hemorrhoids, ukuphazamiseka kwamagciwane nezifo zesikhumba. Imithi yesimanje ithole ubufakazi bokuthi iGuggulsterone powders ingenza isibindi, ilungisa ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism njenge-cholesterol ephezulu. Ngendlela engaziwayo, i-Guggulsterone powders iphinde yandisa ukukhiqiza kwama-hormone we-thyroid, okwandisa ukusetshenziswa kwamandla emzimbeni.
Ukukhishwa kwe-Guggul akufanele kuthathwe nge-warfarin, i-aspirin, izidakamizwa eziphikisana nezidakamizwa noma ezinye izidakamizwa ezivimbela ukuvala igazi. Ukukhishwa kwe-Guggul kungakwandisa ingozi yokugaya okukhulu noma okungalawuleki uma kuthathwe nalezi zidakamizwa. Ukukhishwa kwe-Guggul kungase kuhlangane nama-hormone we-thyroid noma ezinye imithi esetshenziselwa ukwelapha izifo ze-thyroid. Ukubanjwa ndawonye, ​​imithi ye-guggul kanye ne-thyroid ingabangela ingozi yesiphepho se-thyroid, isimo esingasongela impilo lapho kubalwa khona amahomoni amaningi wegciwane. Ukukhishwa kwe-Guggul kunganciphisa kakhulu ukuphumelela kwezidakamizwa zepropranolol noma i-diltiazem.
Labo abaphathwa ngezinkinga ze-thyroid, kuhlanganise kokubili i-hypo- ne-hyperthyroidism, kufanele babonane nodokotela wabo ngaphambi kokuthatha i-guggul extract. Abantu abanesibindi noma isifo sezinso angeke bahambise i-guggul ngokukhipha ngokujwayelekile futhi akufanele bathathe. Ngokuvamile, thintana nodokotela wakho ukuze anqume ukuthi i-guggul itholakala yini ephephile kuwe.
Ezinye Imiphumela Ezingenzeka Ezingenzeka
Ulwazi oluncane lwezesayensi lukhona kuleso simo esinobuthi bokukhishwa kwe-guggul. Ayaziwa ukuthi i-guggul iphephile ngesikhathi sokukhulelwa, kodwa ngenxa yemiphumela kumahomoni wegciwane kanye ne-lipid metabolism kufanele kugwenywe. Ukukhishwa kwe-Guggul kungabangela ubuhlungu bekhanda, isicanucanu, ukuphazanyiswa kwamathumbu nokuqhuma. Ukubikwa kwe-allergen kuya kokukhishwa kwe-guggul kubikwe.
I-Guggulsterone powder iyi-ligand ebanzi ye-steroid hormone receptors, futhi iyaziwa ukuthi inezinto ezilandelayo:
I-Mineralocorticoid receptor antagonist (Ki = 39 nM)
I-progesterone receptor i-agonist eyingxenye (i-Ki = 201 nM)
Umphikisi we-glucocorticoid receptor (Ki = 224 nM)
Umphikisi we-Androgen we-receptor (Ki = 240 nM)
I-Estrogen receptor agonist (Ki> 5 μM; EC50> 5 μM)
I-Farnesoid X receptor antagonist (IC50 = 5-50 μM)
Hlanganisa i-X receptor agonist (EC50 = 2.4 μM ((Z) -isomer))
I-Guggulsterone powder itholakale ekucwaningweni kwezilwane ukuba isebenze ngomlomo; ine-biovailability ngokuphelele ye-42.9% ngemuva kokuphathwa komlomo kuma-rats, ngokuphila kwengxenye yamahora angu-10 azungezile kulezi zilwane, okubonisa iphrofayela enhle ye-pharmacokinetic.
I-Guggulsterone Raw Powder
Ukudayiswa kwe-Raw Guggulsterone powder
Indlela yokuthenga i-Guggulsterone powder kusuka ku-AASraw
I-Guggulsterone Raw Powder Recipes:
I-Guggulsterones (guggul) yokulahlekelwa isisindo kanye nokwakhiwa komzimba
I-febuxostat powder (i-144060-53-7)
I-Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder
I-ticagrelor powder (i-274693-27-5)
I-Boldenone cypionate powder
I-Canrenone powder (i-976-71-6)
I-Nandrolone propionate powder